၂။ နာမ်ခန္ခာ(လေးပါး)တို့သည် စိတ်လှျင် ရေ့ှသွားရှိကုန်၏၊ စိတ်လှျင် အကြီးအမှူးရှိကုန်၏၊ စိတ်ဖြင့် ပြီးကုန်၏၊ သန့်ရှင်းကြည်လင်သောစိတ်ဖြင့် အကယ်၍ ပြောဆိုသော်လည်းကောင်း၊ ပြုလုပ်သော်လည်းကောင်း၊ ကြံစည်သော်လည်းကောင်း ထို(ပြောဆို ပြုလုပ် ကြံစည်)သောကြောင့် အရိပ်သည် (လူကို)မစွန့်မူ၍ အစဉ် လိုက်သကဲ့သို့ ထိုသူသို့ ချမ်းသာသည် အစဉ်လိုက်လေ၏။
၂၃။ ထိုပညာရှိတို့သည် (သမထ ဝိပဿနာ ဈာန်နှစ်ပါးဖြင့် ကိလေသာကို) ရှို့မြှိုက်ကုန်ပြီးလှျင် အမြဲမပြတ် လုံ့လ ပြုကုန်၍ မတွန့်မဆုတ် လုံ့လထုတ်ကုန်လျက် ယောဂလေးပါး၏ကုန်ရာ အတုမရှိမြတ်သော နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြ ကုန်၏။
၃၃။ လေးသမားသည် မြားကို ဖြောင့်အောင်ပြုသကဲ့သို့ ပညာရှိသည် (အာရုံတို့၌)တုန်လှုပ်၍ လှျပ်ပေါ်လော် လည်ခြင်း သဘောရှိသော စောင့်ထိန်းရန် တားမြစ်ရန် ခက်ခဲသောစိတ်ကို ဖြောင့်အောင်ပြု၏။
၅၆။ တောင်ဇလပ် စန္ဒကူးပန်းတို့၏ အနံ့သည် မပြောပလောက် အနည်းငယ်မှျသာဖြစ်၏၊ ဤ သီလရှိသောသူတို့၏ သီလအနံ့သည်သာ ထူးကဲလွန်မြတ်သည်ဖြစ်၍ နတ်ပြည်တို့၌လှိုင်၏။
တတိယ ဓမ္မပဒဝတ္ထုတော်ကြီးကို မန္တလေးမြို့ ဝိဇိတာရုံဆရာတော် ဦးဝိစာရိန္ဒက ရေးသားပြီး အတွဲ (၄) တွဲဖြစ်ကာ စာမျက်နှာ (၂,၀၀၀) ခန့် ပါရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြုဆရာတော် ဦးသေဋ္ဌိလကလည်း ပါဠိတော်ဂါထာ (၄၂၄) ပုဒ်ကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သည်။
↑ ချင်းဗုဒ္ဓသာသနပါလကအဖွဲ့ (ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄). ဓမ္မပဒ (မြန်မာ-အရှိုချင်း-အင်္ဂလိပ်). ရွှေခေတ်စာပေ။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ဦးမြင့်ဆွေ (လန်ဒန်- မဟာဝိဇ္ဇာ) (၁၉၇၇). ဓမ္မပဒ, ပထမအကြိမ်, ရန်ကုန်: နှလုံးလှစာပေဖြန့်ချိရေး, ၁၇-၂၆။
↑ မာဏဝ. ဓမ္မပဒ ဒေသနာတော်များနှင့် ဝတ္ထုတော်များ. နှလုံးလှ စာတည်းအဖွဲ့။
ဓမ္မပဒ ပါဠိ - မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်
ဓမ္မပဒ မြန်မာ - အရှိုချင်း - အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်
ဓမ္မပဒ အန်းဒရွိုက် အပလီကေးရှင်း
ဓမ္မပဒ အိုင်အိုအက်စ် အပလီကေးရှင်း
မာဏဝပြုစုသည့် ဓမ္မပဒ အနှစ်ချုပ်စာအုပ် download
အရှင်ဆန္ဒာဓိကပြုစုသည့် စိတ်အားဖြည့် ဓမ္မပဒ download
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဓမ္မပဒ&oldid=550056" မှ ရယူရန်
၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။